Casho - Gpedia, Your Encyclopedia
Casho (Af Ingiriis : dinner; Af carabi: عشاء) waa cuntada sadexaad ee dadku cunaan habeenkii ka hor intaanay seexan. Sida caadiga ah cashadu waa cuntada ka dambeysa qadada taasi oo dadku cunaan wakhtiga ka dambeeya qorax dhaca ilaa habeen badhka. Wadanada qaar waxaa caan ah in dadku casheeyaan 5ta galabnimo, ka hor intaanay qoraxdu dhicin, taasi oo dhakhaatiirta iyo cunto yaqaanadu ku sharaxeen ineey tahay mid u fiican caafimaadka. Wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan dadka Soomaalidu waxay inta ugu badan casheeyaan salaada cishaa'i wixii ka dambeeya. Sidoo kale, cuntooyinka ugu caansan ee dadka Soomaaliyeed ku casheeyaan waxaa ka mid ah: canjeerada, rootida, sabaayada, malawaxa, baastda, fadiirada, garowga, digirta, cambuulada, qamadiga, misirka, khudaar, midhaha iyo noocyo badan oo halkan lagu soo koobi karin.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Casho&oldid=161131"